राधी विद्युत कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ४ पुस २०७६)
कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. २ करोड ४६ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. १ करोड ९९ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४७ करोड ४५ लाख छ । कम्पनीले गत वर्ष शेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
यस वर्ष भने हालसम्म लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छैन । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ४ करोड ६८ लाख आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी हो । प्रतिशेयर आम्दानी रू. २० दशमलव ८६, मूल्य आम्दानी अनुपात रू. १४ दशमलव शून्य ९, तरलता अनुपात १ दशमलव शून्य ८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २०४ दशमलव ६० छ । बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. १४० कायम भएको छ ।
2019-12-20 - 204 view(s) - abhiyandaily